Saul tan asafo no ani (1-3)
Asɛnka adwuma a Filipo yɛe wɔ Samaria no sow aba (4-13)
Wɔsomaa Petro ne Yohane kɔɔ Samaria (14-17)
Simon yɛe sɛ ɔde sika bɛtɔ honhom kronkron (18-25)
Etiopiani a ɔyɛ ahemfi panyin no (26-40)
8 Saul nso penee kum a na wɔrekum no no so.+ Efi saa da no, nkurɔfo tan asafo a ɛwɔ Yerusalem no ani denneennen. Na wɔn nyinaa bɔ hwetee Yudea ne Samaria nsaase nyinaa so ma ɛkaa asomafo no nko ara.+ 2 Ɛnna mmarima bi a wɔmfa wɔn som nni agoru faa Stefano kosiee no, na wosuu no pii. 3 Na Saul fii ase tuu n’ani sii asafo no so. Owurawuraa afi mu kɔtwee mmarima ne mmea nyinaa, na ɔma wɔde wɔn koguu afiase.+ 4 Nanso wɔn a wɔbɔ hwetee no kyinii asaase no so kaa Onyankopɔn asɛm no ho asɛmpa.+ 5 Na Filipo kɔɔ Samaria+ kurow no* mu, na ofii ase kaa Kristo ho asɛm kyerɛɛ wɔn. 6 Na nnipadɔm no de koma koro tiee nsɛm a Filipo kae no. Na wɔyɛɛ aso maa no, na wɔhwɛɛ nsɛnkyerɛnne a ɔyɛe no. 7 Ná nnipa pii wɔ ahonhom fĩ, na ahonhom no de nne kɛse teɛteɛɛm, na wopue fii wɔn mu.+ Bio nso, mmubuafo ne mpakye pii nyaa ayaresa. 8 Enti anigye kɛse baa kurow no mu. 9 Saa bere no, na ɔbarima bi wɔ kurow no mu a wɔfrɛ no Simon. Ná oyi nkonyaa ma Samaria man no ho dwiriw wɔn, na na ɔka sɛ ɔyɛ onipa kɛse. 10 Ná wɔn nyinaa tie no, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, na na wɔka sɛ: “Ɔbarima yi ne Onyankopɔn Tumi a wɔfrɛ no Ɔkɛse no.” 11 Ná wotie no, efisɛ na ɔde ne nkonyaayi no ama wɔn ho adwiriw wɔn akyɛ. 12 Na bere a wogyee Filipo a ɔreka Onyankopɔn Ahenni+ ne Yesu Kristo din ho asɛmpa no dii no, wɔma wɔbɔɔ wɔn asu, mmarima ne mmea nyinaa.+ 13 Simon ankasa nso bɛyɛɛ gyidini, na bere a wɔbɔɔ no asu wiei no, ɔde ne ho bɔɔ Filipo;+ na nsɛnkyerɛnne ne anwonwade akɛse a na ɛrekɔ so a ohui no maa ne ho dwiriw no. 14 Bere a asomafo a wɔwɔ Yerusalem no tee sɛ nnipa a ɛwɔ Samaria no agye Onyankopɔn asɛm no,+ wɔsomaa Petro ne Yohane kɔɔ wɔn nkyɛn, 15 na Petro ne Yohane sian kɔɔ hɔ kɔbɔɔ mpae maa wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya honhom kronkron,+ 16 efisɛ Awurade Yesu din mu nko ara na na wɔabɔ wɔn asu, na honhom kronkron no de, na ennya mmaa wɔn mu biara so.+ 17 Ɛnna wɔde wɔn nsa guu wɔn so,+ na wofii ase nyaa honhom kronkron. 18 Bere a Simon hui sɛ asomafo no nsa a wɔde gu obi so na ɛma onya honhom no, ɔyɛe sɛ ɔrema wɔn sika, 19 na ɔkae sɛ: “Momma me tumi yi bi, na obiara a mede me nsa begu no so no anya honhom kronkron.” 20 Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo ne wo dwetɛ nyinaa nsɛe,* efisɛ ɛyɛ wo sɛ wubetumi de sika atɔ Onyankopɔn dom akyɛde.+ 21 Wunni kyɛfa biara wɔ asɛm yi mu, na wonka ho, efisɛ wo koma nteɛ wɔ Onyankopɔn anim. 22 Enti sakra w’adwene wɔ saa bɔne a woayɛ yi ho, na srɛ Yehowa* sɛ, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, ɔmfa bɔne a woasusuw wɔ wo koma mu no nkyɛ wo; 23 na mahu sɛ woyɛ awuduru a ɛyɛ nwene,* na woyɛ bɔne akoa.” 24 Ɛnna Simon ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsrɛ Yehowa* mma me, na nea moaka yi mu biara amma me so.” 25 Enti bere a wodii adanse frenkyemm na wɔkaa Yehowa* asɛm no, wɔsan de wɔn ani kyerɛɛ Yerusalem. Bere a wɔrekɔ no, wɔkaa asɛmpa no wɔ Samariafo nkuraa bebree ase.+ 26 Ɛnna Yehowa* bɔfo+ ka kyerɛɛ Filipo sɛ: “Sɔre na kɔ anaafo, ɔkwan a esian fi Yerusalem kɔ Gasa no so.” (Eyi yɛ ɔkwan a ɛda sare so.) 27 Ɛnna ɔsɔre kɔe, na hwɛ! Etiopiani bi a ɔyɛ ahemfi panyin* ni. Ná ɔyɛ otumfo a ɔhyɛ Etiopiafo hemmaa Kandake ase, na ɔno na na ɔhwɛ ne sika nyinaa so. Ná wakɔ Yerusalem akɔsom,+ 28 na na ɔte ne teaseɛnam mu resan akɔ. Ná ɔrekenkan odiyifo Yesaia nhoma no den. 29 Enti honhom no ka kyerɛɛ Filipo sɛ: “Kɔ hɔ, na bɛn teaseɛnam yi ho.” 30 Filipo tuu mmirika kɔɔ ho, na ɔtee sɛ ɔrekenkan odiyifo Yesaia nhoma no den. Ɛnna obisaa no sɛ: “Wote nea worekenkan no ase?” 31 Ɔkae sɛ: “Sɛ obi ankyerɛ me a, mɛyɛ dɛn atumi ate ase?” Enti ɔsrɛɛ Filipo sɛ ɔmforo mmɛtena ne nkyɛn. 32 Kyerɛwnsɛm mu asɛm a na ɔrekenkan no ni: “Wɔde no kɔe te sɛ oguan a wɔrekokum no, na sɛnea oguan ba a wɔretwitwa ne nwi yɛ komm no, saa ara na ɔno nso ammue n’ano.+ 33 Bere a wɔbrɛɛ no ase no, wɔammu atɛntrenee amma no.+ Hena na ɔbɛkyerɛ n’awo ntoatoaso?* Efisɛ wotwaa no* fii asaase so.”+ 34 Ɛnna ahemfi panyin* no bisaa Filipo sɛ: “Mesrɛ wo, hena na odiyifo no reka ne ho asɛm yi? N’ankasa anaa onipa foforo bi?” 35 Filipo fii ase kasae, na ɔde kyerɛwsɛm a na ahemfi panyin* no rekenkan no fii ase kaa Yesu ho asɛmpa kyerɛɛ no. 36 Bere a wɔnam kwan so rekɔ no, wokoduu nsu bi ho, na ahemfi panyin* no kae sɛ: “Hwɛ! Nsu na ɛda hɔ yi. Dɛn na esiw me kwan sɛ mɛbɔ asu?” 37 *—— 38 Ɛnna ɔmaa teaseɛnam no gyinae, na Filipo ne ahemfi panyin* no nyinaa sian kɔɔ nsu no mu, na ɔbɔɔ no asu. 39 Bere a wofii nsu no mu puei no, ntɛm ara na Yehowa* honhom de Filipo kɔe, na ahemfi panyin* no anhu no bio, na ɔde anigye kɛse toaa so kɔɔ ne kwan. 40 Na Filipo kopuee Asdod, na ɔkɔfaa asaase no so toaa so kaa asɛmpa no wɔ nkurow no nyinaa mu kosii sɛ oduu Kaesarea.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Samaria kurow bi.”
^ Anaa “nyera.”
^ Nt., “bɔnwoma nwenenwene.”
^ Anaa “baabi a n’ase fi?”
^ Anaa “ne nkwa.”